Ambohimanatrika Jiolahy roa tratra saika hanendaka niaraka tamin’ny antsy
Jiolahy miisa 2 no voasambotry ny polisin'atsimondrano tetsy Ambohimanatrika ny sabotsy 14 martsa teo tokony ho tamin'ny 11 ora maraina.
Teo am-panaovana ny asa ratsiny mihitsy ireto olon-dratsy niaraka tamin'ny antsy be no hitan'ny polisy manao fisafoana saika hanendaka tetsy Antsahasoa . Vao nahita ny polisy izy roalahy dia nirifatra nandositra. Ny polisy tetsy ankilany avy dia nanenjika ireto olon-dratsy ka tratra teny amin'ny lalamby Ambohimanatrika tsy lavitra ilay toerana saika hanendahany niaraka tamin'ilay antsy ireto farany. Tsy nisy moa ny zavatra lasan'ireto mpanendaka ireto. Tsy ampy taona ny iray amin'ireto mpanendaka satria vao 17 taona monja raha 23 taona kosa ny iray.Nentina avy hatrany tany amin’ny kaomisaria ireto olon-dratsy ireto hanovana fanadihadiana.